I-Huiyu Fluid iye kwi-Analytica 2018 eMunich eJamani
I-Huiyu fluid yaya kwi-Analytica 2018 eMunich eJamani. Umnquba kaHuiyu, i-B1.528-6 #, Iimpompo zethu zomgangatho weendleko ezisebenzayo ezixabisa amakhulu abatyeleli abaziingcali. Malunga ne-Analytica I-analytica ehamba phambili kwezorhwebo kwihlabathi jikelele ibisisiqinisekiso sakho sokwaziswa okuyimpumelelo kwelebhu ...
Uhlalutyo lwe-19 lwaseBeijing kunye noVavanyo lweNgxelo yeZifundo kunye neMiboniso
I-Huiyu fluid yaya kwi-BCEIA2019 kwaye iya kuya kwi-BCEIA2021 eBeijing. . Ndwendwela indawo kaHuiyu, 6A011 #, ukuze ufunde ngesampulu yokusebenza kweNkampani iPeristaltic Pump yonyango lwamanzi, elebhu, uphando lwezenzululwazi kunye nokusetyenziswa. Ukongeza, yiza undwendwele umnquba wethu ukuze ufumane okungakumbi ...
Kule minyaka idlulileyo, ngenkqubela phambili eqhubekayo yezamashishini kunye nokufudukela kwabantu ezidolophini, uqoqosho lwentlalo lukhule ngokukhawuleza, kodwa ingxaki yongcoliseko elandelayo ibe ngumba obalulekileyo ekufuneka ukuba usonjululwe ngokukhawuleza. Unyango lwelindle luye ngokuthe ngcembe ukuba lubaluleke kakhulu ku ...